फरक व्यवसायिक पृष्ठभुमी भएका लगानीकर्ताको तारे होटल मोह ! संख्या बढ्दा बिजनेश घट्यो - Arthapage
फरक व्यवसायिक पृष्ठभुमी भएका लगानीकर्ताको तारे होटल मोह ! संख्या बढ्दा बिजनेश घट्यो
प्रकाशित मितिः February 13, 2020 February 13, 2020
नेपालगन्ज १ फागुण – फरक व्यवसायी पृष्ठभुमीबाट उदाएका व्यवसायीमा तारे होटल खोल्ने मोह देखिएको छ । पछिल्लो एक दशकयता नेपालगन्जमा झण्डै एक दर्जन तारे होटलमा करोडौ लगानी भित्रियो । होटल क्षेत्रका लागि नयाँले लगानी गर्दा यहाँको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिए पनि बिजनेश बढ्न सकेन । तारे होटलको संख्या उत्साहजनकरुपले बढ्दै गएका बेला बिजनेश भने ओरालो लागेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नयाँ र पुराना होटललाई परेको छ ।
कमला मेडिसनका दीपेन्द्र अग्रवाल औषधी विक्रेताका रुपमा देशमै चिनिएको नाम हो । उक्त व्यवसायमा सफल यिनै अग्रवालले सुर्खेतरोडको महङ्गो जग्गामा चार तारे होटल सिग्नेटमा करोडौ लगानी गरे । होटल त खोले तर त्यसका बारेमा जानकार नरहेका अग्रवालले व्यवस्थापन भने सम्हालेनन् । होटलको नाम कृष्णा भए पनि उक्त होटलको व्यवस्थापन सिग्नेटले हेरिरहेको छ । समय उक्त होटल विक्री गर्ने हुने हल्ला चलेको थियो ।
अर्थपेजसंगको कुराकानीमा केही महिना अघि अग्रवालले फरक व्यवसायीक पृष्ठभुमीबाट आएको भए पनि नेपालगन्जको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा योगदान दिन पाएको खुःसी लागेको बताएका थिए । ‘हस्पिटालिटी क्षेत्रमा नयाँपन आएको छ । खुःसी छु ।’– अग्रवालले भनेका थिए,–‘जहाँसम्म होटल विक्री गर्ने कुरा छ त्यो नचलेर विक्री गर्न लागेको चाही होइन ।’ व्यवसायीक सम्पत्ति विक्री वितरण गर्ने कुरा स्वभाविक भएको बताउँदै त्यति नै बेला अग्रवालले औषधी उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना सुनाएका थिए । ‘अब मैले जानेको काम गर्छु ।’–
कपडाका होलसेलरका रुपमा चिनिएका नेपालगन्जका व्यवसायी जगदिश बैश्यले खोलेको कलपत्रु भारतीय व्यवस्थापनमा सन्चालनमा छ । होटल शुभारम्भकै क्रममा बैश्यले ‘नेपालगन्जको पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि सेवाक्षेत्रमा लगानी गरेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । फरक व्यवसायी पृष्ठभूमीका व्यवसायीले तारे होटलमा लगानी गर्ने मोह यत्तिकैमा रोकिएन । खाद्यन, रोजिन हुँदै अमेरिकामा समेत व्यवसाय गरेका प्रतिष्ठित व्यवसायी दिवाकर खनालले सुर्खेतरोडमा सुविधा सम्पन्न खनाल होटल सन्चालनमा ल्याएका छन् । उनले भने व्यवस्थापन आफै सम्हालेका छन् । ‘भविष्यमा राम्रै सम्भावना देखेर’ हस्पिटालिटीक्षेत्रमा लगानी गरेको उनी बताउँछन् ।
‘व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो भने जुनसुकै व्यवसायमा पनि सफल हुन सकिन्छ ।’ खनाल भन्छन्–‘होटल चलाएका मात्र त्यसमा सफल हुन्छन्, अरु हुँदैनन् भन्ने हुँदैन ।’ होटल किचन हटमा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूहका सदस्य होटल व्यवसायबाट आएका होइनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र टे«ड बिजनेशबाट उदाएकाहरुले होटल सम्हालिरहेका छन् । कुनै बेला निकै तामझामका साथ मध्यमस्तरको लगानीमा राँझामा खुलेको ह्वाईट हाउस होटल अहिले बन्द छ । जग्गा कारोवारीले खोलेको होटल ऋणमा चुर्लुम डुबेको देखेर यहाँ हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई त्रसित समेत बनाएको छ ।
पछिल्लो एक दशकयता नेपालगन्जमा उत्साहजनक तरिकाले होटलमा लगानी भयो । मानसरोवर जस्ता पर्यटक गन्तव्य बन्ने देखेर फरक व्यवसायी पृष्ठभुमीबाट आएकाहरुले समेत होटलमा पैसा खन्याउन कन्जुस्याई गरेनन् । ठिक यही बेला प्रदेशको संरचना हेरफेर हुँदा यहाँका सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय अन्यत्र सरे । त्यसको सबैभन्दा धेरै मार होटल क्षेत्रमा परेको छ । अझ मानसरोरका तिर्थयात्रीहरु नेपालगन्जको बिकल्पमा काठमाण्डौ रोज्न थालेपछि त्यसले समेत समस्यामा पारेको छ ।
‘लहडका भरमा होटलमा पैसा खन्याउने काम भएको छ ।’ एकजना तारे होटलका सन्चालक भन्छन्–‘ राम्रो आम्दानी हुने देखेर धेरैले धमाधम पैसा लगाए । नयाँ-नयाँ लगानीकर्ताको उपस्थितीले नेपालगन्जको होटल क्षेत्रमा नयाँ आयाम दिएको मान्नै पर्छ तर बिजनेश सिमित हुँदा सबैभन्दा बढि समस्या उहाँहरुलाई नै परिरहेको छ ।’ क्षणिक सम्भावना देखेर होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएकाहरु यतिबेला निरास छन् ।
यति धेरै तारे होटल धान्न सकिने हो वा होइन भन्ने पूर्व अनुमान नगरी नेपालगन्जमा लगानी भित्रिएको बताउँदै ती भन्छन्,–‘हामीले बिजनेश बढाउन नसक्ने हो भने आगामी दिन अझ मुस्किल हुने निश्चित छ । अब लहडका भरमा होटल थप्ने काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा पनि सचेत रहौं ।’
प्रकाशित मितिः 8:19:06 AM |
Prevप्रदेश एक्स्पोमा ज्ञान प्रवाह र सिकाई केन्द्र देखि नमूना संसद अभ्याससम्म
Nextतीनवटा प्रदेशलाई लक्षित गर्दै कोहलपुरबाट गोरखापत्र दैनिकको प्रकाशन शुरु